Wednesday August 09, 2017 - 04:33:50 in Wararka by Central Office. Office
Professor Maraykan ah oo wax ka qoray Soomaaliya ayaa buugiisa ku sheegay arrin uu ka fahmay sida ay Soomaalidu qabiilka ugu dhaqanto. Wuxuu yiri, dabayaaqadii sideetankii ayaan cilmi baaris ka bilaabay Afmadow. Dhor bilood markii aan joogay oo aan i
Professor Maraykan ah oo wax ka qoray Soomaaliya ayaa buugiisa ku sheegay arrin uu ka fahmay sida ay Soomaalidu qabiilka ugu dhaqanto. Wuxuu yiri, dabayaaqadii sideetankii ayaan cilmi baaris ka bilaabay Afmadow. Dhor bilood markii aan joogay oo aan is leeyahay si fiican baad qabiiladii deegaanka iyo jufooyinkooda hoose u kala bartay ayaan subax maqlay qabiil cusub oo "Absame" la yiraa.
Waxaan iri bal u kaadiya Absame waa ayo?? Waxaa la ii fasiray Absame in uusan qabiiladii iyo jufooyinkii hoose aan maqli jiray ahayn ee Ogaadeen iyo niman la dhashay Absame la isku yiraa. Waxaan is waydiiyey ayuu yiri sababta aan intaasoo bilood Absame u maqli waayey oo aan haatan u maqlay.
Horay Waxaan u maqli jirey Cawlyahan, Maxamad Subeer, Muqaabil, laakiin Absame waxaan maalintaas u maqlay xaaladda markaas soo korortay darteed. Baaritaan ka dib waxaa ii soo baxday buu yiri in saamaynta qabiilka ay ku xiran tahay xaalada xiligaas taagan.
Waa u kuurgalid wax badan ka jiraan.
Professor Peter D. Little
W/T. Abdirahman Abdishakuur
Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Tukaraq
05/11/2018 - 09:16:14
Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay Duleedka Baladweyne
30/10/2018 - 14:12:51
Dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay Magaalada Kismaayo
27/10/2018 - 18:35:40